Sida dib loogu isticmaalo kombiyuutar duug ah adoo adeegsanaya Linux - Ikkaro
Inicio >> Dayactirka >> Soo kabashada kombiyuutar Linux duug ah
Waxay iga tagayaan inaan cusbooneysiiyo kombuyuutar duug ah, Acer Veriton L460. In markii hore ay la timid Windows Vista Business OEM, hadana ay ku rakibtay Windows 7. Waxay ka cabanayaan in ay aad u gaabis tahay oo ay u adeegsaneyso howlo aasaasi ah, waxay rabaan in ay dib u soo ceshadaan.
Windows 7 lama sii taageeri karo kumbuyuutarkani kumaba dhaqaajin karo Windows 10. Wuxuu noqday mid duugoobay. Ugu yaraan in la isticmaalo nooc Windows-ka la taageero ah
Kumbuyuutarka waxaa loo isticmaalaa oo kaliya baarista iyo meelaynta dugsiga, Isticmaal tifaftire qoraal ah Word, LibreOffice. Akhriso pdf oo wax daabac.
Haddii aad aragto astaamaha PC-ga, kaliya wuxuu leeyahay 1Gb oo RAM ah, oo maanta gebi ahaanba duugoobay.
Windows ama Linux
Si qarsoodi ah Waxay iga codsadeen inaan Linux dhigo aniga oo aan sheegin. Marka waxaan ilaaway inaan raadsado nooc Lite ah ama inaan dhigo Windows XP oo aan hadda la taageerin oo ay tahay in lagu rakibo barnaamij burcad badeed ah. Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in Linux lagu dhex daro. Faa'iidooyinka waa badan yihiin kiiskan.
Qaybinta Linux Miisaanka-fudud ee Computers-ka dhaxalka iyo Kheyraadka Hoose
Tani waxay u baahan tahay maqaal lafteeda, laakiin halkan waxaa ku yaal xulashooyin:
Faa'iidooyinka Ku Xidh Linux
Waxaa jira kuwa badan oo dheeraad ah waxaanna kala hadli doonaa iyaga a sheyga qaybinta iftiinka.
Tijaabinta Xubuntu Linux
Markan waxaan ka labalabeeyaa inta u dhexeysa rakibida Xubuntu ama Manjaro XFCE, oo ah laba qaybis oo u baahan 512 MB oo RAM ah. Marka waa inay si habsami leh u shaqeysaa
Waxaan dhameeyay rakibidii Xubuntu qaabkeeda xasilloon 18.04. Sii deynta Manjaro ayaa cabsi igu abuurtay, maxaa yeelay fikradda kombuyuutarradan ayaa ah inay xasilloon tahay si aysan uga daalin isticmaalka Linux. Dhibaato ha siin.
Marka waxaan la soconnaa rakibidda. Tallaabooyinku waa kuwo aad u fudud.
Maaddaama PC-gu horeyba ula yimid keydkiisa oo la sameeyay, markaa uma baahnayn inuu wax xog ah keydiyo oo wuu tirtiri karaa dhammaan waxyaabaha ku jira.
Ku abuur USB xubinta
Si loo rakibo waxaan abuuray a Bootable USB leh Xubuntu iso iyadoo la adeegsanayo Etcher. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo abuuri karo USB-ga la riixi karo laakiin runtii waan jeclahay codsigaas isku dhafka ah.
Soo dejiso sawirka ISO ee Xubuntu boggaaga
Waxaan kala soo baxnaa Etcher, Feeji oo socodsiiya, ku furo adigoo gujinaya laba jeer.
Daaqad ayaa u furan 3 talaabo. Xulo ISO, USB iyo flash
Primero waxaan doorannaa sawirka ISO ee aan ka soo dejinnay Xubuntu, ka dibna waxaan doorannaa qaybta aan dooneyno inaan ka dhigno bootable. Tan awgeed waa inaad USB-ga dhigtaa, taxaddarna ka muujisaa tallaabadan ha dooran wadis adag oo ka duwan oo masixi wax walba. Sababtoo ah waxay qaabeysaa darawalka aad doorato inaad ku rakibto Linux.
Ugu dambeyntii waxaad garaacday Flash! waana diyaar.
Ku rakib Xubuntu
Marka aan diyaarino USB-ga waanu rakibi doonaa. Taas awgeed waxaan ku dhejineynaa PC-ga, waana bilaabaynaa. Haddii aad bilowdo USB-ga weyn, waa inaad sii wadataa.
Haddii uusan ka kicin USB laakiin waxay u rogmaysaa caadi, kiiskan wuxuu ku xirayaa Windows 7 markaa waa inaad gasho BIOS oo beddel ikhtiyaarka ah inaad ku shubtid saxannada dibadda marka hore.
BIOS waxaa caadi ahaan lagu heli karaa adigoo riixaya F2 isla marka aad daarto. Waxaan sii wadeynaa cadaadiska F2 illaa ay ka galeyso. Kumbuyuutarrada qaar ama laptops-yada halkii F2 laga heli lahaa waa Esc ama fure kale, haddii aysan kuu shaqeyn adiga waxaa lagaa rabaa inaad ka baarto Google ama buugga hooyadaada oo fure u ah in lagu galo BIOS.
Sidee u egtahay
Waxay u egtahay sidan. Waxay u shaqaysaa sidii soo jiidasho.
Runta ayaa ah inay qurux badan tahay. Menusku waa yara fudud yihiin, laakiin dabcan haddii aan rabno inay iftiin noqoto wax badan kama weydiisan karno heerka garaafka.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay, in lagugu dhiirigalinayo inaad tijaabiso Linux-ka oo haddii aad wax su'aalo ah qabtid ka tag faallo
Laba mowduuc oo ay tahay inaan si qoto dheer uga hadlo maqaal kale
Abuur maqaal ku saabsan sida ugu wanaagsan ee wax loo qaybiyo kombiyuutarada duugga ah iyo kheyraadka hooseeya ama laptops
Sharax sida loo sameeyo USB-ga la kici karo si loo rakibo Linux ama Windows qaybinta.
Categories Linux, Dayactirka Tigidhka tigidhka
0 faallooyin ah "Ka soo kabashada kombiyuutar duug ah oo leh Linux"
Ogosto 29, 2020 markay tahay 11:22 pm
1.1 Windows ama Linux
2 Qaybinta Linux Miisaanka-fudud ee Computers-ka dhaxalka iyo Kheyraadka Hoose
3 Tijaabinta Xubuntu Linux
3.1 Ku abuur USB xubinta
3.2 Ku rakib Xubuntu
3.3 Sidee u egtahay